एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग र यसले निम्त्याउने खतरा « Anumodan National Daily
एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग र यसले निम्त्याउने खतरा
स्वास्थ्यमा सानोतिनो गडबडी हुनसाथ औषधी किनिहाल्ने र चपाइहाल्ने बानी छ, हामीकहाँ । चिकित्सकको परामर्श बिना वा स्वास्थ्य जाँच नगरी सोझै औषधी पसलमा गएर औषधी माग्ने र खाने चलन व्यापक छ ।
औषधी के हो ? त्यसले शरीरमा कसरी प्रभाव पार्छ ? किन, कुन समयमा र कसरी सेवन गर्नुपर्छ ? भन्ने आधारभूत ज्ञान हामी अधिकांश नेपालीसँग छैन । कसैले भनेको भरमा जस्तोसुकै औषधी खान हतारिन्छौ । यसरी नै हामीले धेरै पटक एन्टिबायोटिक पनि चपाएका छौ । जबकी त्यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने हामीलाई हेक्का नै छैन ।
जान्नैपर्ने केहि कुरा
– एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग त्यसबेला मात्र गर्नुपर्छ, जब शारीरिक समस्या ब्याक्टेरियाको कारणले पैदा भएको हो भन्ने टुंगो हुन्छ ।
– एन्टिबायोटिक्सको जथाभावी प्रयोग गर्दा ब्याक्टेरियाले त्यस बिरुद्ध लड्ने क्षमता विकास गर्छ । जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा औषधीको प्रभाव रहँदैन ।
– ब्याक्टेरियाले आफ्नो कोषिका बदलेपछि हामीलाई एन्टिबायोटिक्सले काम गर्दैन र समस्या थप चर्को बन्छ ।
– एन्टिबायोटिक्स चलाएपछि पुरा डोज लिनुपर्छ । अन्याथा ब्याक्टेरियाले अर्को रुप लिएर आक्रमण गर्छ ।
एन्टिबायोटिक नै रोगको पूर्ण निदान होइन । एन्टिबायोटिक खाएपछि त्यसले शरीरमा संक्रमित ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्छ । यस हिसाबले कुन किसिमको ब्याक्टेरिया हो, त्यही आधारमा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको मात्रा, अवधी, समय सबैकुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।
यद्यपी जुनसुकै अवस्थामा एन्टिबायोटिक सेवन गर्छौ । यस किसिमको प्रयोगले शरीरमा भएका ब्याक्टेरियाले आफ्नो रक्षात्मक क्षमता बढाउँछ । कोषिका परिवर्तन गर्छ । यसलाई ‘ड्रग रेजिस्टेन्स’ भनिन्छ ।
किन खतरा ?
एन्टिबायोटिक्सको प्रयोगबारे हामी उतिधेरै सचेत छैनौ । एन्टिबायोटिक्स लिइसकेपछि त्यसको निश्चित डोज पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, हामी जथाभावी औषधी किन्छौ । मनोमानी ढंगले प्रयोग गर्छौ । आफ्नो समस्या ठिक भइसकेपछि औषधीको डोज पुरा नगरी छाडिदिन्छौ ।
के हो एन्टिबायोटिक्स ?
अब बुझ्न मन लाग्छ, एन्टिबायोटिक्स के हो त ?
कसरी गर्ने त सहि प्रयोग ?
जब एन्टीबयोटिक्सको विकास गरिन्छ, त्यतिबेला नै उक्त औषधीले शरीरमा कति बेला सम्म काम गर्न सक्दछ भनेर आंकलन गरिएको हुन्छ । र, शरीरमा कति मात्रामा उक्त औषधी रहन्छ भनेर हेरिएको हुन्छ ।
त्यसैले गर्दा चिकित्सकहरुले जुन एन्टीबायोटिक्स जसरी खान सल्लाह दिन्छन्, त्यही अनुसार किन खानु पर्छ भने त्यो समय भन्दा तल वा माथि उक्त एन्टीबायोटिक्सको प्रयोग गर्दा त्यो मात्रामा शरीरले उक्त औषधी प्राप्त गर्न सक्दैन । शरीरले आवश्यक्ता अनुसारको औषधी नै पाउन नसकेपछि उक्त औषधीले गर्नु पर्ने काम वा व्याक्टेरिया मार्नु पर्ने क्षमतामै र्‍हास आउन सक्छ ।
‘म्याजिक बुलेट’ भनेर चिनिने एन्टीबायोटिक्स चिकित्सा क्षेत्रको चमत्कारी देन हो । यसको सही प्रयोग हुन सकेको अवस्थामा मानव जीवन स्वस्थ रहन सक्दछ । यस्ता एन्टीबायोटिक्स कुनै पनि व्याक्टेरियल संक्रमणमा हुन सक्दछ । यसले लामो समय सम्म गर्नु पर्ने उपचारलाई छोट्याएर केही समय सम्ममै पनि ठीक पार्न सक्छ ।
तर यसको सही प्रयोग नभएको खण्डमा यसको बेफाइदा धेरै हुनसक्छ । अझ भावी पुस्तामा यसको असर धेरै हुन सक्ने देखिएको छ । जस्तै, समयमै एन्टीबायोटिक्स नखानु, डोज पूरा नगर्नु । त्यस्तै, एन्टीबायोटिक्स प्रयोग गर्दा यसले शरीरमा भएको कुनै न कुनै कोषिकालाई असर पार्ने हुदाँ यसका साइड इफेक्टस् धेरै हुने गर्दछ ।
-पखाला, दिशा लाग्नु
-मृगौलामा असर पार्ने
-शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा र्‍हास आउने
विश्वव्यापी आतंकः ड्रग रेजिस्टेन्स
नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा अहिले ड्रग रेजिस्टेन्स विश्वव्यापी ‘थ्रेड’को रुपमा देखा परेको छ । सन् २०५० सम्म यही तरीकाले एन्टीबायोटिक्सको गलत प्रयोग भएको अवस्थामा भविष्यमा एन्टीबायोटिक्सले सही तरीकाले काम गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान गरिएको छ । जसका कारण विश्वमा त्रिलियन डलर खर्च हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
यही कारण एन्टीबयोटिक्सको सही सदुपयोग गर्नु पर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत विश्वका स्वास्थ्यमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुले बारम्बार यस विषयलाई उठाइरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट संघले पनि आˆनो एजेन्डामा ड्रग रेजिस्टेन्सको कुरा उठाईरहेको छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालयले पनि यस विरुद्ध लड्नु पर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
सन् १९४१ सम्म मानिसहरुलाई रोग लाग्ने र मानिसहरुको मृत्यु हुने गर्थे । तर सन् १९४१ तिर के पत्ता लाग्यो भने हाम्रो शरीरमा रोग लाग्नुमा ब्याक्टेरिया मुख्य कारण भएको देखियो । र, त्यही वर्ष मानव शरीरमा एन्टीबायोटिक्सको प्रयोग पहिलो पटक गरियो ।
त्रि. वि शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठ फर्माकोलोजिस्ट प्रा. डा. सतिस देवसँगको कुराकानीमा आधारित
शिक्षा योजना निर्माण शुरु
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा योजना निर्माणको कार्य अघि अघि बढाएको छ
एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एन्टिजेन’ विधिमार्फत कोरोना परीक्षण शुरु भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास
एक स्थानीय तह–एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह–एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
धनगढी मावि एक सातासम्म बन्द
धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालयले बिहीबारदेखि एक